Madaxtooyada Xiinka Air uumi LED nalalka udugga Electric Muhiimka ah Oil Udgoon Diffuser - Design fiican & Sameeyo Co., Ltd
Item no.:ODMF16-072107 Box Size: L15.5 * W15.5 * H20.5cm Weight:0.68biyo kg:60ml awood: 7danab Input W:100-240V，50Hz / 60HZ,0.15danab Output A:24V-0.35ku jiraan A: 1pc qaab galaas mahrajaan(D14.5 * H14.1cm) ,1adabtarada pc, 1pc koobka cabbirka, 1pc A4 warqadda fariimaha size. Xidhmada: 3 lakabka sanduuqa jiingado leh insert warqad. 6Kumbiyuutarada / CTN / 47 * 32 * 24.5CM / 0.0368CBM NW.5.4kg / GW.7kg MOQ:1000 sharxayaa FOB Shanghai USD16.50 / OEM dhigay adeegga Can noqon habka Shipping UPS / oogeen / EMS / TNT / FedEx, by badda .Adiga hawada Deliv ...
Size Box: L15.5 * W15.5 * H20.5cm
danab Input:100-240V，50Hz / 60HZ,0.15A
1pc qaab galaas mahrajaan(D14.5 * H14.1cm) ,1adabtarada pc, 1pc koobka cabbirka, 1pc A4 warqadda fariimaha size.
Xidhmada: 3 lakabka sanduuqa jiingado leh insert warqad.
6Kumbiyuutarada / CTN / 47 * 32 * 24.5CM / 0.0368CBM NW.5.4kg / GW.7kg
Innovation to keeni,ku dadaala to beergooyska,Integritsi ay unbsp;to mustaqbalka,anaga waa Hubaal guulaystaan
Gaar Design Xiinka Muhiimka ah Oil Diffuser
2017 New Products Real Glass Muhiimka ah Oil Commercial Udgoon Diffuser